महिलाको खुसी - विशेष - नारी
वुमन इम्पावरमेन्ट (महिला सशक्तीकरण) लाई एक कदम पछाडि राख्दै विश्व अहिले वुमन हेप्पिनेसतर्फ लम्किरहेको छ । हरेक कोणले सशक्त महिला पनि खुसी नहुन सक्छन् तर अन्तस्करणदेखि नै खुसी महिला हरेक दृष्टिकोणले सशक्त हुन्छन् भन्ने पछिल्लो विश्वव्यापी अवधारणाअनुरूप संसारमा अहिले वुमन हेप्पिनेसको मुद्दा अगाडि आएको हो । ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ । जहाँ नारीको आदरएवं सम्मान हुन्छ त्यहाँदेवता पनि खुसी हुन्छन् भन्ने श्लोक यत्तिकै बनेको होइन । यसले परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्वमै बलियो प्रभाव छाड्ने कुरामा दुईमत छैन ।
एउटी महिलालाई के कुराले खुसी बनाउला त ? हाम्रो जस्तो पूर्वीय तथा पितृसत्तात्मक समाजमा यसको उत्तरमा केही समानता भेटिएला तर वर्ग, जाति, वातावरण तथा सामाजिक–शैक्षिक एवं पारिवारिक स्तर हेरी व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा भेटिन्छन् । मूलत: महिलालाई खुसी पार्ने कुरा के ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आमधारणा स्वतन्त्रता भन्ने आउन सक्छ तर हर दृष्टिकोणले स्वतन्त्र महिलालाई खुसी पार्ने कुरा के हो त ?
थप खुसीका लागि...
जीवनका दुईवटा पाटा हुन्छन्–व्यक्तिगत र व्यावसायिक । परिवारले मेरा भावना वा इच्छा बुझेर सोहीअनुसार प्रोत्साहन (एक्नलेज) गरेकोमा मलाई खुुसी लाग्छ । व्यावसायिक जीवनमा मैले जानेका, सिकेका, मसँग भएका ज्ञान र सीप अरूलाई दिन पाउँदा र दिएको कुरा अरूले राम्रोसँग प्रयोगमा ल्याएको देख्दा मलाई सन्तुष्टि मिल्छ । फरक र चुनौतीपूर्ण काममा सफलता प्राप्त हुँदा खुसी लाग्छ । पूर्वीय संस्कृतिमा रमाउने महिलाहरू अरुलाई खुसी देख्दा पनि खुसी हुन्छन् तर पश्चिमी समाजमा आफ्नो खुसीलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । अरूले के भन्ला भन्दा पनि म के चाहन्छु भन्नेतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
शशि बि.सी., बरिष्ठ तालिम अधिकृत,
सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवा
मलाई स्वस्थ महिला देख्दा खुसी लाग्छ । मेरो विचारमा महिलाको खुसीको मापन गर्ने मुख्य कुरा स्वास्थ्य हो । जब महिला स्वस्थ हुन्छिन् तब मात्र उनले हरेक काम कुशलतापूर्वक गर्न सक्छिन् । अर्को कुरा हाम्रो पेसामा कस्ता–कस्ता केस हेरिन्छ । माया मारिसकिएका कतिपय बिरामीलाई बचाउन पाउँदा वास्तविक खुसी मिल्छ मलाई । जीवनदान सर्वश्रेष्ठ कुरा हो । यसमा सफल हुँदाको क्षणको म वर्णन नै गर्न सक्दिन ।
डा. रितु लामिछाने, चिकित्सक, नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल
स–साना विद्यार्थीको सफलता र मुस्कानमा म धेरैठूलो खुसी पाउँछु । आफूले सिकाएका कुरा उनीहरूलेसही रूपमा सिके भने र पढाइमा मात्र नभएर अन्य क्रियाकलापमा समेत उनीहरूलाई अब्बल बनाउन पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ । मेरो धेरै समय उनीहरूसँगै बित्छ । वर्षमा थोरै समय छुट्याएर परिवारसँग लामो यात्रामा निस्कन्छु । त्यो मेरा लागि खुसी हुने अर्कोउपाय हो । नेपाली महिलाको कुरा गर्नुपर्दा शिक्षा, आर्थिक सम्पन्नता, स्वरोजगारी तथा निर्णायक क्षमता वृद्धि गर्न सकियो भने खुसी खोज्न कतै भौंतारिइरहनु पर्दैन ।
कुमुद भट्ट, प्रिन्सिपल
तपार्इं अहिले चर्को घामले पोलेकोमा दु:खी हुनुहुन्छ होला तर म यसभन्दा बढी आगोको राप दन्कियोस् भन्ने चाहन्छु किनभने मलाई यसले खुसी प्रदान गर्छ । आगैनफुकी कहाँबाट हुन्छ मकैको व्यापार ? मलाई त जति धेरैमकै बिक्री हुन्छन् उति खुसी लाग्छ । पैसा नै सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ, पैसा आए खुसी नत्र दु:खी ।
रामकला मगर, मकै व्यवसायी
म व्यवसायीका साथै डिजाइनरसमेत भएका नाताले राम्रा पहिरनमा सजिएर हिँडेकाहरू देख्दा मन फुरुङ्ग हुन्छ । त्यसो त म आफै टिपटप भएर हिँड्दा आत्मविश्वासी महसुस गर्छु । पहिरनले नारीलाई सुन्दर देखाउने मात्र होइन भित्रैदेखि खुसी बनाउँछ। त्यसैले त फेसनको वर्चस्व संसारभर उत्तिकै छ ।
-उषा कार्की, डिजाइनर तथा व्यवसायी
- द सिड्नी मोर्निङ हेराल्डको सन् २०१५, जुलाई १५ को अंकमा लुसी बेट्र्सबी लेख्छिन्–मेरो १० वर्षे अध्ययनमा अस्ट्ेरलियाका विवाहित दम्पतीमध्ये महिला बढी असन्तुष्ट भएको देखियो । ३१ हजार व्यक्तिबीच गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा जब महिलाहरू शारीरिक सन्तुष्टि चाहन्छन् उति नै बेला पुरुष कोअपरेटिभ नहुने तथा धूम्रपान गर्नेहरू नगर्नेसँग सहकार्यमा नजानेसम्म देखियो । सोही अनुसन्धानले ४० देखि ५० वर्ष उमेरका महिला १८ देखि २९ वर्षका महिलाको तुलनामा बढी असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ ।
- जाईकाको एक अध्ययनले २८ सेप्टेम्बर सन् २००६ मा सरकारद्वारा पारित लैङ्गिक समानता नीतिअन्तर्गत वैवाहिक बलात्कार, सम्पत्तिको अधिकार, लैङ्गिक विभेदजस्ता कानुनी प्रावधानलेनेपाली महिलालाई केही हदसम्म अधिकारसम्पन्न बनाएको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसैगरी सन् २००२ को एघारौं संशोधन कानुनी रूपमा अझ बढी महिलामैत्री देखियो ।
- सन् २००५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टले महिलाको औसत आयु ० दशमलव ५१ अर्थात् ९९४ देखाएको छ भने पुरुषको १८६८ देखिन्छ ।
- ६१ प्रतिशत नेपाली महिला तथा ३९ प्रतिशत पुरुष घरेलु तथा साना उद्योग सम्बद्ध काममा आबद्ध छन् भने समग्रको ८० प्रतिशत महिला साना घरेलु उद्यमद्वारा आय आर्जन गर्छन् ।
- नेपालको हरेक तहको राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति १० प्रतिशत देखिन्छ ।
- ४३ प्रतिशत नेपाली महिला कार्यस्थलमा दुव्र्यवहारको सिकार भएको महिला कानुन तथा विकास मञ्चको शोधले देखाएको छ ।
- ३३ दशमलव ५ प्रतिशत नेपाली युवती १५ देखि १९ वर्षको उमेरभित्र विवाह गरिसक्छन् भने यसमा पुरुषको संख्या ११ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ ।